Guardiola oo siiyay Sterling talo soo jiidasho leh ee ka dhan ah xiddigaha Ronaldo iyo Messi – Gool FM
Guardiola oo siiyay Sterling talo soo jiidasho leh ee ka dhan ah xiddigaha Ronaldo iyo Messi
(Manchester) 13 Sebt 2019. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa siiyay Raheem Sterling talo soo jiidasho leh ee ka dhan ah xiddigaha Ronaldo iyo Messi.
Raheem Sterling ayaa ku nool hormar layaab leh marka loo eego gooldhalintiisa mudooyinkii dhawaa ee la soo dhaafay, wuxuu sameeyay rikoor gooldhalineed ee aad u fiican xirfadiisa xili ciyaareedkii lasoo dhaafay isagoo dhaliyay 25 gool.
Sterling ayaa sidoo kale xili ciyaareedkan wuxuu kaga bilaabay si cajiib ah, wuxuuna 6 gool ugu dhaliyay 5 kulan kooxdiisa Manchester City.
Guardiola ayaa kaga digay Raheem Sterling inuusan dhageysanin isbar-bardhigyada noocaan oo kale ah, wuxuuna u arkaa in xiddigii hore Liverpool uusan wali gaarin heer la mid ah xiddigaha Ronaldo iyo Messi.
Pep Guardiola ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka ay habeen dambe kula ciyaari doonaan kooxda Norwich City horyaalka Premier League wuxuu talo soo jiidasho leh siiyay Raheem Sterling wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay isaga, sida uu ugu ciyaarayo kooxda iyo xulka, laakiin waxaan rajeynayaa inuusan dhagaysan doonin ama aqrin doonin waxyaabaha noocaas oo kale ah, qofna lama barbar dhigi karo Ronaldo iyo Messi”.
“Ma ogi inuu isagu yahay kan ugu fiican ee England, waxaad tahay saxafi, laakiin tan iyo markii aan wada joognay, ma ahan hadda oo kaliya, wuxuu ahaa nin cajiib ah, oo leh anshax shaqo ee aad u weyn, waa nin fiican, marka waan ku faraxsanahay isaga”.
Antonio Conte oo ka hadlay isbar-bardhiga xiddigaha Ronaldo iyo Lukaku
Horudhaca kulanka horyaalka La Liga ee Kooxaha Real Madrid vs Levante… (Miyey Los Blancos sii joogteyn kartaa guuldarro la’aanteeda horyaalka?)